तिमीलाई थाहा छ, हरेक देश uniqiue छ. हरेक देश कारण सूची प्राप्त गर्नेछ, किन यो चयन. र यहाँ युक्रेन लागि कारण एक सूची छ. अब तपाईं युक्रेनमा किन अध्ययन थाहा.
युक्रेनी विश्वविद्यालय साँच्चै उच्च गुणवत्ता शिक्षा छ. unviersities एक धेरै रूसी वा युक्रेनी भाषामा अध्ययन अंग्रेजी वा तैयारी संकाय मा पाठ्यक्रम छ.
विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम (युरोप, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, को, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, आदि)
युक्रेनी विश्वविद्यालयहरु यो सबै बुझेका छन्. तपाईंको उपाधि संसारमा सबैतिर उत्कृष्ट हुनेछ.
कसले चिन्न मेडिकल डिग्री, यूनेस्को, पेट (बेलायत), USMLE (संयुक्त राज्य अमेरिका), यूएस र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भर
चिकित्सा पाठ्यक्रम विदेशी विद्यार्थीहरू सबैभन्दा Ukraing मा लोकप्रिय छ. तपाईं easly युक्रेनमा MBBS अध्ययन गर्न सक्छन्, किनभने यसले विश्व मा सबैतिर मान्यता गरिनेछ.
कुनै JAMB, IJMB, TOEFL, IELTS, क्याम्ब्रिज A.LEVEL, NABTEB
यो शब्द अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको को ठूलो संख्या लागि scarry छन्. तिनीहरूले अर्थ अतिरिक्त तलब र कडा भर्ना. तर यो युक्रेनमा सजिलो छ. तपाईंले यो परीक्षा कुनै पनि के गर्न आवश्यक छैन.
कुनै प्रवेश परीक्षा, स्नातक गरेको कार्यक्रम को लागि मात्र माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र
एक पुच्छर जस्तै लाग्दछ, तर यो सत्य हो. साँच्चै सजिलो भर्ना.
शिक्षण शुल्क आगमन मा सशुल्क
विद्यार्थीहरूको एक धेरै आगमन अघि तिर्न चाहँदैनन्. यहाँ तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. निश्चित, के तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एजेन्सी को निमन्त्रणा पत्र र सेवाहरूको लागि तिर्न, तर जे भए पनि, लगभग सबै पैसा तपाईं मात्र युक्रेन गर्न आगमन पछि तिर्छु. आफ्नो पैसा सुरक्षित छ.
प्रभावकारी लागत (सस्ता युरोपेली शिक्षा)
सबै भन्दा कम शिक्षण शुल्क संग युरोपेली शिक्षा खोज्दै? यहाँ छ. युक्रेन साँच्चै सस्तो शिक्षा छ
युरोपेली जीवन मानक
युक्रेन केन्द्र र युरोप को पूर्व मा स्थित. यो युरोप मा सबै भन्दा ठूलो देश छ. यहाँ कम मूल्य संग जीवन को साँच्चै युरोपेली standarts छ.
राम्रो नौकरी संभावनाहरु
युक्रेन क्यारियर सुरु लागि राम्रो स्थान छ
सबै राउन्ड वर्ष मध्यम जलवायु
अचम्मको तातो वा जीवनकालमा चिसो बारेमा भूल. यस वर्षको सबै मौसम युक्रेनमा सुन्दर छन्
अनुभव को संवर्धन संयुक्त राज्य अमेरिका देखि Visiting प्रोफेसर कारण, क्यानाडा, बेलायत, आदि.
विश्वविद्यालय को एक ठूलो संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका साझेदारीमा छ, क्यानाडा र युरोपेली unviersities. यो सबै भन्दा कम शिक्षण शुल्क संग युक्रेनमा विश्वव्यापी प्रसिद्ध proffessors पूरा गर्न आफ्नो मौका छ.
स्थायी निवास संभावना & अध्ययन कार्यक्रम को पूरा भएपछि युरोप मा बन्दोबस्त
यो साचो हो. राम्रो विद्यार्थी हुन र तपाईं युरोपेली देशमा निवास प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त.
100% भिषा योग्य उम्मेदवार गर्न आश्वासन
थप एक प्लस – तपाईं गर्नेछौं 100% तपाईं युक्रेनी विश्वविद्यालय मा अध्ययन भने भिषा प्राप्त.
आखिर हामीले भन्न चाहनुहुन्छ, युक्रेन साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि क्षमता विशाल नम्बर अचम्मको देश हो भनेर. युक्रेनमा अध्ययन र तपाईं यसलाई प्रेम पर्नु छौँ. युक्रेन भ्रमण र तपाईं प्रश्न चाहिन्छ छौँ छैन “किन युक्रेनमा अध्ययन?”
युक्रेनमा शीर्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय 2017